Ndeapi makambani makuru ekugadzira mishonga muIndia? | Absolut Kufamba
Indasitiri yemishonga yeIndia ndeimwe yeakakura kwazvo pasirese. Iyo Makambani anotungamira emishonga eIndia pamwe chete, ndidzo dzinotengesa zvinodhaka zvakajairika pasi rose. Uye zvakare, ivo vanopa inopfuura makumi matanhatu muzana yepasi rose chinodikanwa chemishonga.
Kwete izvozvo chete: kuIndia kune angangoita chiuru nemazana mana emiti yemiti inogamuchirwa ne WHO. Ivo vanogadzira angangoita makumi matanhatu ezviuru zvigadzirwa kubva kuma60.000 akasiyana marapirwo ezvikamu Nemakambani anodarika zviuru zvitatu emishonga ari kushanda uye netiweki yakasimba yeanopfuura zviuru gumi nemazana mashanu emarabhoritari ekugadzira, zvinogona kutaurwa zvakachengeteka kuti India ndiyo pharmacy huru papasi.
Iyo indasitiri yemishonga ye India Yakakosha mu2019 paUS $ 36.000 bhiriyoni. Mageneral madhiragi, ane 71% chikamu chemusika, inoumba chikamu chakakura kwazvo mukugadzirwa kwayo.
Heino runyorwa rwemakambani anotungamira emishonga muIndia. Yedu yepamusoro 10:
1 Cadila Hutano
7 Zuva Pharma
Ndiyo kambani hombe yemishonga muIndia. Iyo yakavambwa mu1952 na Ramanbhai patel uye iri muAhmedabad. uye rave rakakura kambani yemishonga muIndia.
Cadila Healthcare ine gumi yekugadzira michina kutenderera nyika munzvimbo dzakasiyana kutenderera nyika: Navi Mumbai, Ankleshwar, Changodar, Goa, Vatva, Baddi, Dabhasa, Vadodara, Dabhasa ne Patalganga.
Iyo zvakare ine dzimbahwe rayo muAhmedabad uye inogadzira michero munzvimbo dzakasiyana dzenyika. Pharma Torrent ine hunyanzvi mukugadzirwa kwemishonga yekurapa kwepakati sisitimu (CNS), kusagadzikana kwepamuviri, analgesics nemishonga inorwisa mabhakitiriya.
Nekukura kunoshamisa mumakumi emakore apfuura, CIPLA, yakagadzwa muMumbai muna 1935, yakave imwe yemakambani anoita mishonga zvikuru muIndia.
Iyo yakasimba inovandudza mishonga yekurapa zvirwere zvakasiyana zvakaita sekuora mwoyo, chirwere cheshuga, kana zvirwere zvekufema. Huwandu hwayo hwekutengesa hwakatenderedza mamirioni zviuru mazana manomwe pagore (anenge mamirioni makumi manomwe neshanu euros) Iine nzvimbo nomwe dzekugadzira umo vashandi vanopfuura 7.000 vanoshanda.
Pasina mubvunzo imwe yemakambani makuru ekugadzira mishonga muIndia, ine mukurumbira wepasirese wepasi rose. Iyo kambani yakavambwa muna 1984 ne Chiremba Anji Reddy. Inzvimbo yayo iri muHyderabad uye inogadzira inodarika zana nemakumi masere emishonga pamwe neanopfuura makumi mashanu anoshanda emishonga yemishonga.
Kune manomwe Dr. Reddys Labs ekugadzira zvirimwa muIndia. Kunze kwenyika, iyo femu ine marabhoritari muRussia uye inogovera mishonga yekambani yemishonga yeBelgian UCB SA muSouth Asia.
Nhamba yayo yekutengesa inopfuura zviuru mazana mashanu emamiriyoni rupees pagore. Lupine akaberekwa muna 5.000 nekuda kwechirongwa che Desh Bandhu Gupta, mumwe wevaongorori vane mukurumbira munyika. Iyo kambani parizvino inotengesa zvigadzirwa zvayo kune nyika dzinopfuura makumi manomwe pasi rose, kusanganisira South Africa, Japan, Australia neEuropean Union.
Wepamusoro Mishonga Makambani muIndia
Yakatangwa mu1988, Aurobindo Pharma Limited inobata nezvose zviri zviviri kugadzirwa uye kugadzirwa kwemageneral madhiragi uye zvinoshanda zvinoshandiswa. Ane hunyanzvi munzvimbo nhanhatu dzekurapa: Central Nervous System, yemoyo, inorwisa mabhakitiriya, antiretroviral, antiallergic uye gastroenterological zvigadzirwa.
Iyo kambani inotengesa zvigadzirwa zvayo kune nyika dzinopfuura zana nemakumi maviri uye ine mari inodarika mabhiriyoni mana emadhora pagore.
Imwe yemakambani makuru ekugadzira mishonga muIdnia, yakavambwa na Dilip shanghvi muna 1983 munzvimbo yeVapi yeGujarat. Pakutanga Sun Pharma yakatsaurirwa kuburitsa mhando shanu dzemishonga yakanangana zvakanyanya nekurapa kusagadzikana kwepfungwa. Gare gare, kambani yakawana mishonga Ranbaxy, ichiwedzera guta rayo uye ichiwedzera kugadzirwa kwayo.
70% yemishonga yeSun Pharmaceutical inotengeswa muUnited States. Mumakore achangopfuura kambani yatanga kuwedzera kwakasimba uko kwaitungamira kuvhura zvirimwa munyika dzakaita seMexico, Israel kana Brazil.
Innovexia Hupenyu Sayenzi Pvt. Ltd. inozivikanwa se kambani inotungamira pasirese mukugadzira nekutengesa kwemishonga yakasiyana siyana. Mukurumbira wekambani iyi yemishonga iri mune yakanyanya kukwirisa timu yenyanzvi, zvivakwa zvayo zvemberi uye nekudyara kwayo muzvirongwa zvitsva zvekutsvaga.
Kubva muBombay, Alkem Laboratories ndeimwe yemakambani anotungamira emishonga muIndia. Zvigadzirwa zvaro zvinotengeswa munyika dzinopfuura makumi mana- Yakakwira mhando generic zvinodhaka, zvinoshanda zvemishonga zvinoriumba uye nutraceuticals. Pakazara, anodarika mazana masere emhando anofukidza ese makuru ekurapa zvikamu.
Alkem inotengesa uye inotengesa zvigadzirwa muUnited States pasi pechiratidzo Kukwira. Saizvozvo, inosimudzira chiitiko chayo mune mimwe misika senge Australia, Chile, Philippines neKazakhstan, pakati pevamwe.
Rondedzero yedu inopedzisa na IPCA Laboratories Ltd., kambani ine makore anopfuura makumi matanhatu ezviitiko. Zvigadzirwa zvaro zvinogoverwa mune dzimwe nyika zana nemakumi maviri, nepo zvivakwa zvaro zvawana rumbidzo kubva kuvakuru vane masimba ekurwisa zvinodhaka pasi rese.
Chimwe chezvinangwa zvikuru zveIPCA ndechekuchengetedza huwandu hwepamusoro mune zvese zvigadzirwa, kubheja pane hunyanzvi mune mamwe marapirwo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Ndeapi makambani makuru ekugadzira mishonga muIndia?
Raju Mahtani akadaro
Ndinoda kuziva mazita emaLaboratori muIndia, ayo anozivikanwa neDIGEMID yePeru
Pindura Raju Mahtani
ELIAS TAHAN akadaro
Ndinoda kuziva runyorwa rwezvigadzirwa zvemumabhawa kuti vazive zvavanazvo uye vagone kushanda navo, isu tine Imba yekumiririra yeVenezuela, Colombia neCentral America
Pindura kuna ELIAS TAHAN